iphone 12 saizi kuenzanisa: iyo nyowani mutsara unopesana nemakwikwi uye zvekare mafoni
Kuru Nhau & Ongororo iPhone 12 saizi kuenzanisa: mutsara mutsva unopesana nemakwikwi uye maPhones ekare
iPhone 12 saizi kuenzanisa: mutsara mutsva unopesana nemakwikwi uye maPhones ekare
Iwo maPhones matsva ari pano uye pane akawanda kupfuura nakare kose. Tine iyo iPhone 12 Mini , yakajairwa iPhone 12 uye, chokwadika, iyo iPhone 12 Pro vaviri . Gore rino, Apple irikuchinja zvinhu zvishoma kwete chete nedhizaini nyowani asi hukuru hutsva futi. Isu & maapuro; tichava nezvinyorwa zvakawanda zvinoenzanisa mafoni matsva kuzvizvarwa zvekare uye vanokwikwidza veApple maererano nema specs, makamera uye nezvimwe zvese zvakakosha. Pano, zvakadaro, isu & apos; tichazotarisa pahukuru.
Iwe unogona kunge wakaona iwo matsva ekuratidzira saizi iyo 2020 iPhones inopinda, asi iyo & apos; iyo hafu nyaya yacho. Iine slimmer yekuratidzira bezels uye dhizaini-kumucheto dhizaini, iyo iPhone 12 mhuri yakatonyanya kuumbana kupfuura iwe & apos; d kutarisira.
Zvimwe iPhone 12 zvinyorwa zvaunogona kufarira:
iPhone 12 Pro Ongorora
iPhone 12 Ongororo
iPhone 12 mini Ongororo
iPhone 12 Pro Max Ongororo
Yakanakisa pre-odha madhiri paApple iPhone 12 Pro, 12 Pro Max
5G pane iyo iPhone 12: iyo inotevera-gen network ichaumba sei nharembozha
Saka, regai & apos; titange nekuenzanisa pakati pehukuru hutatu iyo iPhone 12 mhuri inopinda.
iPhone 12 Mini vs iPhone 12 vs iPhone 12 Pro Max: saizi kuenzanisa
Takawedzera iyo iPhone 12 Pro kuitira kuti iwe usazive saizi yakafanana neiyo iPhone 12. Sezvo zvazvinova pachena ipapo, pane & apos; musiyano wakakosha pakati pekadiki iPhone 12 uye chikuru. Iyo & apos; s yakazara yakazara mutsara kana iwe uchida kufadza sevazhinji vashandisi sezvinobvira.
Une iyo iPhone 12 Mini, yefoni-compact foni ine bezelless kuratidza (ichiri notch, hazvo) kune avo vanovenga maitiro emahara mafoni. Zvino, iyo yepakati saizi yeavo akatove akashandiswa kune tsoka kubva kune yavo iPhone 11 kana iPhone XR. Saizi yekuki-cutter, kana uchida. Uye, hongu, kune avo vasina yakakwana screen real estate, iyo nyowani iPhone 12 Pro Max ine nyowani 6.7-inch inoratidzira. Zvichafananidzwa sei nedzimwe jumbo-saizi mureza, isu & apos; tichaona muminiti.
iPhone 12 vs iPhone 11 vs iPhone SE vs iPhone 8 Kuwedzera saizi kuenzanisa
Zvino, nguva yekuona kuti iyo base modhi, iyo iPhone 12, inofananidzwa ichipesana nedzimwe iPhone fomu-zvinhu.
Apple iPhone 8 Uyezve
Iyo iPhone 8 Plus yakanaka zvakanyanya parutivi neiyo iPhone 12 Pro Max kana zvasvika pakukura, asi iwo mabhezeri anodya chikamu chikuru chemberi, achiisiya iine chiratidzo icho & apos; zvidiki pane izvo zveiyo iPhone 12. Iyo iPhone 11 yakafanana ne12 asi iyo yakatenderera mativi uye mukobvu anoratidza bezels inoita kuti iwedzere kukura. Iyo iPhone 12 inoratidzika kunge yakajeka, yaive nguva yekuti maPhones awane chinoonekwa chekuvandudza. Izvi zvinorevawo kuti mazera mashoma anotevera anogona kunge akafanana neiyi.
Iyo itsva iPhone SE inogona kunge iri diki pane ino boka, asi kana tikaisa iyo iPhone 12 Mini padivi payo, matafura anozoshanduka. Ehe, iwe unogona kusanganisa uye kuenzanisa chero foni yaunoda mune yedu saizi yekuenzanisa chishandiso. Nemubatanidzwa wakawanda kwazvo, hatigone & kuvhara zvese zviri muchinyorwa chino. Asi isu tine mamwe mashoma lineups anosanganisira mafoni kubva kunze kweApple ecosystem.
iPhone 12 Mini vs Pixel 5 vs Galaxy S10e vs Galaxy S20 saizi yekuenzanisa: diki raungawana
Iwe unogona kunge uchinetseka kuti idiki sei iyo iPhone 12 Mini ichienzaniswa nemamwe mafoni kubva makore achangopfuura isu tinofunga compact. Zvakanaka, ngatitarisei uye muzive!
Enzanisa idzi nedzimwe foni uchishandisa saizi Kuenzanisa chishandiso. Isu tinoziva, tinoziva, iyo Galaxy S20 haisi foni diki, asi ndiyo & diki ndiyo diki pane yeSamsung & apos; yazvino Galaxy S mutsara. Pamberi payo, iyo Galaxy S10e yaive yechokwadi diki-fomu-chinhu mureza, asi iyo iPhone 12 Mini inoitora kuenda padanho rinotevera. Iyo & apos; zvechokwadi ndeye-ye-e-mhando mukirasi yayo. Kunyangwe iyo Pixel 5, iyo inogona kuve nyore kuiswa mubatanidzwa seye compact foni mu2020 inotaridzika yakakura padhuze neMini.
Kana zvasvika pakurema nekurema ipapo & apos; hapana makwikwi zvakare. Apple yakave nechokwadi chekuburitsa kudzikiswa kwemaviri mapoka pane ese ayo mamodheru matsva. Mabhatiri akakura? Kwete gore rino!
iPhone 12 Pro Max vs Galaxy S20 Ultra vs Galaxy Note 20 Ultra vs OnePlus 8 Pro saizi yekuenzanisa: iyo hombe iwe yaunowana
Nguva yekuenda kune kumwe kunopera kwetambo. Kune vamwe vanhu, kunyangwe kana mafoni akagovana iwo mamwe mafekitori, iyo flagshippiest (iyo & apos; iro izere izwi) pakati pavo ndiro hombe. Mushure mezvose, iwo ndiwo anodhura kwazvo. Eya, heano mamwe emahara akakurumbira mafoni achienzaniswa neiyo nyowani iPhone 12 Pro Max:
Enzanisa idzi nedzimwe foni uchishandisa saizi Kuenzanisa chishandiso. Ipo iri padiki diki iyo iPhone 12 Mini yakaita kuti vese varohwe, kune rimwe divi iyo & apos; s zvakapesana chaizvo. Kunyangwe Apple yakatambanudza kuratidzwa kwayo kupfuura nakare kose, iyo iPhone 12 Pro Max ichiri chidiki kwazvo muboka. Uye ma & apos; zvingangove zvichave mune ramangwana futi.
Icho chikonzero ndechekuti kusiyana nevamwe vagadziri vanosarudza kureba screen ratios, Apple inosimbirira pakuchengeta chimiro cheayo maPhones zvakafanana zvisinei nehukuru. Izvi zvinoreva kuti kuratidzwa kwakatokura kuchaita kuti foni ive yakafara kuti ibate zvakanaka. Apple ingangoita kutamira kuchiratidziro chakakura gore rino nekuda kwemipendero yakatetepa iyo yaibvumidza kuti zvishandiso zvive zvishoma, asi zvinoita sekunge izvo zvinogona kunge zvakakura semaPhones.
iPhone 12 vs Pixel 5 vs LG Velvet vs OnePlus 8 saizi yekuenzanisa: yepakati pasi
Iyi lineup ingaite senge isinganzwisisike pakutanga, asi aya ese ari $ 700 kusvika $ 800 mafoni, zvirinani pakutanga kwehupenyu hwavo pamusika. Ivo & apos; zviri pachena zvakasiyana zvakanyanya asi vanovavarira kuve yakajairwa pfungwa mureza sarudzo kubva kune avo vagadziri vagadziri. Saka, ivo vanofananidza sei saizi-huchenjeri? Ngatitarisei!
Enzanisa idzi nedzimwe foni uchishandisa saizi Kuenzanisa chishandiso. Kana saizi yakaenzana kukosha kwauri, saka iyo LG Velvet ndiyo yakajeka mukundi, chidiki chayo notch inotarisa pasi pane vamwe vese. Mushure meizvozvo kunouya OnePlus 8 iine yakareba, asi inonzwisisika zvine huremu hwehuremu uye huremu hwakaenzana kunyangwe nehukuru hudiki. Iyo iPhone 12 inouya inotevera, yechipiri nekurema asi yakatetepa pane ese mana. Iwo .6 mamirimita anonyatso kuverenga! Iyo iPhone zvakare iri zvishoma zvishoma uye inooneka ipfupi, ichiita kuti ive yakanaka compact pasina kuzvidaidza iyo Mini. Asi iyo Pixel 5 yakatonyanya kudiki, pa5.7-inches kureba.
Izvi zvinoreva here kuti Pixel 5 ndiyo yakakosha kukosha? Zvirokwazvo kwete. Iko kune & apos; yakawanda kune foni kupfuura iyo yekuratidzira asi kutsvagisa mune iwo mafekisheni, software uye makamera ndeyechimwe chinyorwa. Izvo & maapuro; akakosha kucherechedzwa, zvisinei, kuti iyo 'iPhones inodhura' trope inhau dzekare, kunyanya kana iwe uchifunga yakachipa iPhone 12 Mini iyo inogovera iwo akafanana maficha seye mukoma mukuru. Asi izvo & maapos; zvakare akakodzera kutaura nezvazvo mune yakasarudzika chinyorwa. Zvese munguva yakafanira!
gorilla girazi 5 kukwenya bvunzo
verizon inotenga pa & t
Yakanakisa Newegg Nhema Chishanu madhiri
BestBuy uye Walmart Nhema Chishanu kushambadza kunodonha - $ 250 makadhi echipo ane Galaxy S7 kana S7 kumucheto
Sony Xperia XZ Premium vs Z5 Premium: unofanira kusimudzira?
Maitiro ekudhawunirodha iOS 11 Veruzhinji beta uye gare gare kudzosera kumashure kuIOS 10.3
Kwayedza Yekuongorora - Iyo Inokurumidza Nongedzo
Yakanakisa imwe nzira, yechitatu-bato makiyi eApple, iPhone, uye iPad
Dzakasiyana Nzira dzeKutaurirana kuburikidza neMepu muJava
Costco inokuchengetedza mari pakutenga kwe $ 100 Google Play kodhi uye $ 50 kadhi rechipo